I-Communism yeBhayibhile: Yintoni IBhayibhile Eyithetha NgamaKomanism & Socialism?
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngayo NgobuKomanisi neNtlalo?
Isihloko esinye sengxoxo esivela rhoqo rhoqo ukuxhamla phakathi kobuKristu obusondeleyo kunye nokulwa nobuthathaka. Kwiingcinga zabantu abaninzi baseMelika, ukungakholelwa kuThixo kunye nobukhomanisi baxhomekeka ngokungafihliyo kunye nezenzo zezopolitiko ezichasene nobukhomanisi ziye zathatha ixesha elide zomeleza ubuKristu bobukhosi baseMerika.
Ngaloo ndlela uhulumeni waseMerika wenza " KuThixo Sithemba " isiqubulo sesizwe kwaye sibeke kuyo yonke imali kuma-1950.
Kwakungenxa yesi sizathu sokuba "phantsi koThixo" yongezwa kwisibambiso soBulungiseleli ngexesha elifanayo.
Ngenxa yento yonke, umntu ufumana ingcamango yokuba iBhayibhile yinto ethile yokuphathwa ngongxowankulu kunye noYesu owayengumxininkulu wokuqala. Inyaniso yokuba into eyahlukileyo ibonakala iyinyaniso, ngoko iyamangalisa. Incwadi yeZenzo inamagama amabini acacileyo abonisa ukuba ngumthonyama woluntu lwamaKristu okuqala:
Bonke abo babekholelwa bebonke, kwaye zonke izinto zifana; Kwaye bathengisa impahla yabo neempahla, baza bahlukana nabo bonke abantu, njengoko bonke abantu babeyidingayo.
(IZenzo 2: 44-45)
Kwakungekho mntu uhlwempu phakathi kwabo, kuba amazwe amaninzi okanye izindlu zazithengisa kwaye zazisa imali eyathengiswayo. Bawabeka ezinyaweni zabapostile, kwaye kwasasazwa ngamnye ngamnye njengoko kunesidingo. Kwakukho umLevi, owokuzalwa waseSipro, uYosefu, abapostile bamthiya uBharnabhas (oku kuthetha ukuba "unyana wokukhuthaza"). Wathengisa intsimi eyayiye, wabuzisa imali, wayibeka ezinyaweni zabapostile.
(IZenzo 4: 34-37)
Ngaba kunokwenzeka ukuba umgca kaMarx owaziwayo "Kusukela ngamnye ngokwemandla akhe, ngamnye kuye ngokwemfuno yakhe" waphefumlela ngokuthe ngqo kwiTestamente Elisha? Ngokukhawuleza emva kwesi siqendu sesibini ibali elincomekayo ngokuphathelele isibini, uAnanias noSafira, abathengisa isiqwenga sepropati kodwa banikezela uluntu isabelo semali, begcina abanye babo.
Xa uPetros ebabambisana nale nto, bobabili bawa phantsi bafe-bashiya ingcamango (kubantu abaninzi) ukuba bawabulala.
Ukubulala abanikazi bomhlaba bendawo yokubulala abahlulekayo ukunika yonke imali yabo kuluntu? Akunjalo nje kobuKomanisi, nguStalinism.
Ngaphandle koko, ngaphezu kwezi zingentla, zininzi iingxelo ezibhekiselele kuYesu ezigxininisa ukwenza konke onokukwazi ukunceda abampofu-de ukuya kwinqanaba lakhe ukucebisa ukuba isityebi sithengise yonke impahla yakhe kwaye sinike imali kwiintsizana ukuba ufuna ngokwenene ukuya ezulwini. IThestamente Endala ibonisa nokuba into ehambelana ne-communism yindlela ekhethekileyo yokuphila:
Yiyo iNkosi eyayiyalileyo: Hlangani kuyo, elowo kuni, njengokuba angadla; Uza kuthatha i-omere enye, ngokweli nani labantu abani naleyo ententeni yakhe. Abantu bakwaSirayeli benza njalo; Baqokelela ezinye, ezinye zingaphantsi. Ke kaloku, xa belilinganisa ne-omere, lowo wabutha abaninzi wayengenanto; ngamnye wahlanganisana ngokokuya kudla
(Ex 16: 16-18)
Akumangalisi ke ke ukuba nayiphi na indima yamaqela angamaKristu athathe iindlela zokuphila ezize zichazwe ngokucacileyo kwiibali zeBhayibhile, zibonakalisa iingcamango zamaKomanisi.
Amaqela afaka i-Shakers, i-Mormon, i-Hutterites kunye nokunye.
Isishwankathelo, le nto ayinengxaki enkulu ngeBhayibhile njengengxaki kubantu ababiza ukuba balandela iBhayibhile baze bayisebenzise njengesikhokelo sabo sendlela esimele baphile ngayo. Abanye ngokuqinisekileyo bathatha iindinyana ezinje ngentla ngentliziyo-ubungqina obuqinileyo bezenkolo zamaKatolika amaninzi kunye ne-Theology Liberation Teology eyavela kwiKatolika.
Uninzi, nangona kunjalo, ukungazihoyili iindinyana ezingenhla - njengokuba zihoxisa enye into ephosakeleyo kwezopolitiko okanye ngokuziphatha.
Ukuphononongwa koThutho oluzinzileyo: Iingxaki kunye neZisombululo
Izinto ezili-10 ozoziwa malunga neKemistry
Ikhosi ye-Crash kwiiNgqungquthela zeeLwimi
IsiNgesi ngeenjongo zezoNyango - iiNyango zeeNyango
Indlela Yokuphumelela Intliziyo Ye-Leo Woman